Mareykanka oo shaaciyay in si khaldan loo dhoofiyay Anthrax - BBC News Somali
Mareykanka oo shaaciyay in si khaldan loo dhoofiyay Anthrax
Image caption Mareykanka waxa uu sheegayaa in aysan jirin halis soo gaartay dadweynaha.
Waaxda gaashaandhigga Mareykanka ayaa amar ku bixisay in baaritaan lagu sameeyo sida ay ku dhacday in walxaha tijaabada ah ee la doonayay in laga baaro cudurka dilaaga ah ee kudka kaddib markii la ogaaday in walxo halis ah oo sababi kara cudurkaasi si khalad ah loogu diray shaybaarada cilmibaarista ee ku yaalla gudaha iyo dibadda Mareykanka.
Bayaan ka soo baxay Pentagon-ka ayaa lagu sheegay in 11 gobol oo Mareykan ah iyo labo dal oo dibadda ah oo kala ah Kuuriyada Koonfureed iyo Australia la rumeysan yahay in loo diray walxahaasi.
Waaxda gaashaandhigga mareykanka waxa ay sheegaysaa in ay heshay ilaa iyo shan shixnadood oo ah walxaha loogu talagalay tijaabada cudurkani, kuwaasi oo mid ka mid ah la geeyay dalka Australia.
Dhacdadani cusub ee haatan soo baxday ayaa waxa ay muujinaysaa in khaladaad badan oo dhanka nidaamka ah ay ka dhaceen xarunta cilmibaarista ciidamada ee gobolka Utah, taasi oo ahayd in marka hore la xaqiijiyo in walxahaasi aysan ahayn kuwo dadka qaadsiin karaya cudurka kudka ka hor inta aan la gayn sheybaarada.
Waaxda gaashaandhigga mareykanka waxa ay intaasi ku dartay in aysan jirin halis gaar ah oo ku wajahan dadweynaha, sidoo kalena ay jirto hasli aad u yar oo ku wajahan shaqaalaha sheybaaradani balse waxaa la amray dib u eegis baaxad leh oo dhanka nidaamka ah lagu sameeyo sheybaaradada milateriga ee lala xiriirinayo arrintani si loo yareeyo halista cudurkaasi.
Sidoo kale waaxdani waxa ay ku talisay in la hakiyo tijaabada ka socota sheybaarada la geeyay walxahani ilaa iyo mar dambe.